भव्य सफलताको सँघारमा सातौं आइसिटी इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड ब्राण्डिङ एक्स्पो - Living with ICT
Home / Featured / भव्य सफलताको सँघारमा सातौं आइसिटी इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड ब्राण्डिङ एक्स्पो
Shiva Basnet Apr 29, 2014	Leaveacomment
वैशाख ११ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड २ आइसिटी इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड ब्राण्डिङ एक्स्पो २०१४ मंगलबार सकिँदै छ । वैशाख १५ गतेसम्म निर्धारित एक्स्पाे दर्शककाे चाप र मागलाई मध्यनजर गरी साेमबार एक दिन थपिएकाे हाे । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले उद्घाटन गरेको साताै‌ सस्करणकाे एक्स्पोमा सहभागी कम्पनी र अवलोकनकर्ताको उपस्थिति उल्लेख्य छ । १ सय ४ ओटा स्टलमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका नयाँ प्रविधिहरू एक्स्पोमा प्रदर्शनमा राखिएको छ । मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रोजेक्टरदेखि पेनड्राइभ र एन्टिभाइरससम्म एक्स्पोमा प्रदर्शनमा राखिएको छ ।
पाँच दिनसम्म सञ्चालन भइसकेको एक्स्पोमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ताले अवलोकन गरिसकेको आयोजक आइसिटी एशोसिएशन अफ नेपालले जनाएको छ । एक्स्पो अवधिमा आयोजक र स्पोन्सर कम्पनीहरूले अवलोकनकर्तालाई विभिन्न पुरस्कार र गिफ्ट ह्याम्पर पनि प्रदान गरेका छन् । यस वर्षको सातौं आइसिटी ब्राण्डिङ एक्स्पो अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा अझ भव्य र उत्कृष्ट भएको अाइसिटी एशाेसिएशनका महासचिव तथा एक्स्पो संयोजक शोभन सैंजूले बताए ।
ब्राण्डिङ एक्स्पो २०१४ मा मोबाइल प्रविधिका विभिन्न उत्पादन आकर्षणका केन्द्र भएका थिए । दुई दर्जनभन्दा बढी स्टलमा मोबाइलका पछिल्ला मोबाइल सेट प्रदर्शनमा रहेका छन् । सातौं एक्स्पोसम्म आइपुग्दा मानिसहरुको आकर्षण ग्याजेट्समा बढेको छ । अहिले कम्प्युटर, ल्यापटपमा प्रयोग हुने पार्टहरु मोबाइल फोनमै पाइन थालेपछि पुराना प्रविधि विस्थापित भइरहेका छन् । त्यस्तै अर्को कुरा कम्युनिकेशन टेक्नोलोजीमा रहेको छ । युटिएलले निशुल्क रुपमा सिम बाड्दा बाड्दै पनि नेपाल टेलिकमको थ्री जी सिमको स्किम निकै चलेको छ । पहिलेका एक्स्पोमा डेक्स्कटपहरुकै बाहुल्यता देखिन्थ्यो भने अहिले प्रोजेक्टर, स्मार्टफोन र अरु नयाँ टेक्नोलोजीतिर दर्शकको आकर्षण बढेको छ । अब नेपालीहरु पनि ब्राण्ड र लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा विश्वास गर्न थालेका छन् । साथमा, स्र्टाटपहरुलाई एक्स्पोले स्थान दिदैं उनीहरुको डेभलपमेन्टमा केही हदसम्म सहयोग गरेको महशुश अायाेजकले गरेकाे छ ।
प्रभावकारी एक्स्पोको आयोजनाका लागि स्वेदेशी संस्थाका साथमा विदेशी संस्थाको सहयोग समेत लिन अाफूहरु सफल भएकाे एशाेिसएशनका उपाध्यक्ष भेषराज पाैडेल बताउँछन् । भारत, फिनल्याण्ड दुतुवासले सपोर्टरको रुपमा उनीहरुको लोगो प्रयोग गर्न दिएका छन् । आगामी दिनमा आइसिटी डेभलपमेन्टमा उनीहरुसँग छलफल गर्दै जाने याेजना ल्याइएकाे छ । त्यस्तै भारत, फिनल्याण्ड र चीनका दुतुवासबाट एक्स्पो उद्घाटनमा गरिएकाे प्रतिवद्धताले पनि अायाेजक उत्साहित छ ।आइतबार श्रीलंकाको टिमले एक्स्पो भिजिट गर्‍यो । जापानी दुतुवास पनि एशाेसिएशनसँ मिलेर काम गर्न इच्छुक छ ।
एक्स्पोमा ५ सय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय सफ्टवेयर नि:शुल्क प्रदान गरिने कुरा पनि आकर्षणको केन्द्र रह्यो । शिक्षामा आइसिटीको प्रयोगलाई व्यापक रूपमा अघि बढाउन एशोसिएशनको यो एउटा पहल रहेको अध्यक्ष शिशिर उपाध्यायले बताए । यस ब्राण्डिङ एक्स्पोमा भारतदेखि फिनल्याण्डसम्मका एम्बेसीहरूको सहभागिता र सहयोग रहेको छ । एक्स्पोमा १ हजार ५ सयमा डुअल सिम विथ फुल मल्टिमिडियासहितको मोबाइल, विश्वको सबैभन्दा सानो मोबाइल किवी मोबाइल २ हजारमा किन्न पाइने किवी मोबाइल तथा विश्वकै बलियो वाटर प्रुफ रक गियरका स्र्माटफोन हेर्न र किन्न दर्शकको घुइँचो लागेको छ । यसैगरी नेपाल टेलिकमले १ सय रुपैयाँमा किन्न पाइने थ्रिजी सीममा समेत नेपाल टेलिकमको स्टलमा दर्शकको भीड लागेको थियो। एक्स्पो अवसरमा विभिन्न ल्यापटप कम्प्नीहरूले विशेष छुट, उपहार तथा लक्की ड्रको व्यवस्थासमेत गरेका छन्।
यस ब्राण्डिङ एक्स्पोमा भारतदेखि फिनल्याण्डसम्मका एम्बेसीहरूको सहभागिता र सहयोग रहेको छ । भारत एक्जिबिटर्स पनि एक्स्पोको सहआयोजकमा देखिएको छ भने इजी पे इन एशोसिएशनका रूपमा एक्स्पोमा सहभागी भएको छ । एक्स्पोको शीर्ष प्रायोजन सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड २ ले गरेको छ । गतवर्ष पनि सामसुङ मोबाइलको ग्यालेक्सी ग्राण्ड सिरिज नै शीर्ष प्रायोजकमा रहेको थियो । त्यसैगरी प्लाटिनम स्पोन्सरमा यस वर्ष पनि इन्फोकस रहेको छ । डाइमण्ड स्पोन्सर्डमा इस्लिङ्टन कलेज र हुवावे मोबाइल रहेका छन् । गोल्ड स्पोन्सरमा कार्बन र पानासोनिक मोबाइल छन् भने सिल्भर स्पोन्सरमा जोलो मोबाइल रहेका छन् ।
त्यस्तै एक्स्पोमा अमेरिकन ब्राण्ड इनफोकसले मल्टिपल प्रोजेक्टर म्यापिङ प्रदर्शन गरिरहेको छ । एउटा विशेष म्यापिङ सफ्टवेयर प्रयोग गरी तीन वटा प्राजेक्टर जोडेर ठूलो स्कृनमा एउटै भिडियो डिस्प्ले गर्न सकिने प्रविधि उसले प्रदर्शन गरिरहेको छ । इनफोकसको नेपाल स्थित आधिकारिक बिक्रेता ह्युमन क्लिक इन्टरप्राइजेजले सो प्रोजेक्टर ल्याएको हो । यसमा प्रयोग भएको टेक्नोलोजी र डिजिटल बोर्डबाट लिन सकिने बेनिफिटबाट भिजिटर निकै उत्साही देखिन्छन् । विशेषगरी करपोरेट, एजुकेशन, हस्पिटल, प्रशासन लगायतका क्षेत्रले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने इन्टरप्राइजेजका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रोशन भण्डारीले बताए ।
भारत एक्जिबिटर्स पनि एक्स्पोको सहआयोजकमा देखिएको छ भने इजी पे इन एशोसिएशनका रूपमा एक्स्पोमा सहभागी भएको छ । एक्स्पोको शीर्ष प्रायोजन सामसुङ ग्यालेक्सी ग्राण्ड २ ले गरेको छ । गतवर्ष पनि सामसुङ मोबाइलको ग्यालेक्सी ग्राण्ड सिरिज नै शीर्ष प्रायोजकमा रहेको थियो । त्यसैगरी प्लाटिनम स्पोन्सरमा यस वर्ष पनि इन्फोकस रहेको छ । डाइमण्ड स्पोन्सर्डमा इस्लिङ्टन कलेज र हुवावे मोबाइल रहेका छन् । गोल्ड स्पोन्सरमा कार्बन र पानासोनिक मोबाइल छन् भने सिल्भर स्पोन्सरमा जोलो मोबाइल रहेका छन् ।त्यसैगरी अफिसियलहरूमा टेलिकममा नेपाल टेलिकम, होटलमा होटल अन्नपूर्ण, एयरलाइन्समा सिम्रिक एयरलाइन्स, इन्स्योरेन्समा शिखर इन्स्योरेन्स, सिसिटिभीमा रकवेल, नेटवर्किङमा डिलिंक र रेष्टुरेन्टमा वाइफाई क्याफे रहेका छन् । अफिसियल म्यागजिनहरूमा लिभिङ विथ आइसिटी, पिसी इन्फो, इसिएस र स्पेसेस रहेका छन् भने मेडिकलमा माइक्रोलाइफ रहेको छ । त्यसैगरी सपोर्टरहरूमा विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, एम्बेसी अफ इन्डिया, एम्बेसी अफ फिनल्याण्ड, एफएन सिएसआई, थिएटर भिलेजलगायत रहेका छन् । यस एक्स्पोको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भने डा. सिएसले गरेको छ ।
Previous मैले सातौ संस्करण अहिलेसम्मकै विशेष र सफल भएको पाएको छु
Next आइसिटी सप्ताहको सुरुवातमा ‘सूचना, सूरक्षा र सचेतना’ संवन्धि कार्यक्रम सम्पन्न